Nahazo fanitarana voalohany tamin'ny 'Rise of the Ghost' ny lalao 'Rage 2' - Lalao
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly Nahazo fanitarana voalohany tamin'ny 'Rise of the Ghost' ny 'Rage 2'
Nahazo fanitarana voalohany tamin'ny 'Rise of the Ghost' ny 'Rage 2'
by Trey Hilburn III Septambra 30, 2019
nosoratan'i Trey Hilburn III Septambra 30, 2019
Ny korontana miloko neon an'ny Rage 2 dia mahazo ny fanitarana voalohany amin'ny Mitsangana ny matoatoa. Amin'ity DLC voalohany ity dia mandray faritra vaovao hilalaovana ianao, fitaovam-piadiana vaovao handotoana sy ankolafy vaovao miaraka amina endrika mamono anao '.
RAGE 2fanitarana voalohany, Mitsangana ny matoatoa, azo alaina ho an'ny PC izao, Xbox One, ary PlayStation 4. Ireo matoatoa mampalahelo dia niverina niverina tany amin'ny tany efitra ambanin'ny fitarihan'ny olon-dratsy vaovao tsy fantatra, Iris. Ny fanaparitahana ny fitaoman-dry zareo nanotrite raha nanandrana nitaona an'izao tontolo izao ho amin'ny maraina antsoina hoe mazava kokoa ny andro dia hery adala tokony hatrehana ireo matoatoa. Mikaroha faritra vaovao, miatrika fizarana vaovao mahafaty, ary mahazo fidirana amin'ny fitaovam-piadiana sy fahaizana vaovao amin'ny Mitsangana amin'ny matoatoa.
Mitsangana ny matoatoa misy amin'ny rehetra sehatra, azo sintonina avy amin'ny magazay ao amin'ny lalao ho an'ny vola madinika 1500 RAGE ($ 15). Mpilalao tompon'ny RAGE 2 Deluxe Edition tonga dia mahazo fidirana amin'ny DLC maimaim-poana.
Bethesda SoftworksRage 2Mitsangana ny matoatoaXbox One
Andian-tsarimihetsika fahagagana 'Ghost Rider' an'i Marvel izay tsy mandroso
'Skyman' an'i Dan Myrick no hanao premiere amin'ny Austin Film Festival